/blog/gallery/Synephrine HCL Powder - Abụba burner na ibu ọnwụ Mmeju
Ihe na 11 / 25 / 2019 by 阿斯劳 dere na gallery.
Taa, ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị bi na-achọ nhọrọ iji nọgide na-enwe ezigbo ahụ ike. Ọ dị mma, n'etiti ha niile, ojiji Synephrine HCL ntụ ntụ bụ otu n'ime ụzọ ndị kasị dịrị nchebe ị nwere ike isi debe abụba na-adịghị mma na mmiri. Synephrine ntụ ntụ bụ alkaloid chemical compound nke na-adịghị ahụkebe ịchọta. Ọ bụ ihe okike sitere na osisi dị ka oroma ọjọọ, n'etiti ndị ọzọ.
Synephrine ntụ ntụ molekụla ahụ dị ka nke ephedrine, nke bụ otu n'ime ihe kachasị abụba na-ere ọkụ. Otú ọ dị, Ephedrine anọghịzi n'ahịa dị ka mgbakwunye ihe oriri; ya mere, Synephrine bụ ihe kachasị mma. Octamine bụ Synephrine nke metabolite ma wee bụrụ nke ama ama maka njirimara na-ere ọkụ.
Synephrine bụ onye na-adịghị ike activator maka alpha-1 na alpha-2 adrenoreceptors. Ọrụ abụọ a site na ịza adrenaline na-eme ka ọbara mgbali elu na oke obi mmadụ. Ya mere, Synephrine 5985-28-4 enweghị ike ibute mmụba nke obi gị ma ọ bụ ọbara mgbali.
Nke ahụ bụ isi ihe dị iche n’etiti ephedrine na Synephrine 5985-28-4, dị ka a maara ephedrine iji rụọ ọrụ abụọ alpha-1 na alpha-2 adrenoreceptors siri ike.
Synephrine HCL na-akpalikwa ndị nabatara U2 neuromedin. Ndị a bụ ụmụ irighiri ihe dị na hypothalamus na nke na-amụba amụ anya.
Synephrine na-arụ ọrụ site na ịkwụsị mmepụta nke eotaxin-1. Nke ahụ bụ molekul na-emegharị ahụ nke eosinophils ka ọ kwaga ebe ọkụ. Ọ na-egbochi ọrụ NADPH oxidase, nke a na-emepụta site na neutrophils na n'aka nke ya, na-emepụta ọtụtụ ụdị oxygen.
(1) Synephrine HCL maka Ọnwụ Arọ
Fatba abụba abụghị naanị ihe egwu ahụike, mana ọ nwekwara ike ime ka ị daa jọọ njọ. Abụba na-ere ọkụ na-enweta ọtụtụ uru, gụnyere ime ka ị dị ogologo ndụ. N'ụzọ dị mma, iji Synephrine HCL mee ihe bụ otu n'ime usoro egosipụtara ị nwere ike iji gbazee abụba ahụ. Nke a bụ otu o si enyere gị aka imezu ebumnuche a;
Ọ dịghị mkpa ka ị gaa mgbatị ahụ ma nwee ike gwụrụ ụra niile; Synephrine nwetara gị. Ọ na-eme dị ka mmanụ ọkụ site na iji nri niile dị gị mkpa iji nwee nnọkọ mgbatị ahụ na-egbu egbu. Icemụ chiri na Synephrine ntụ ntụ A hụrụ na ha enweela ike igwu mmiri ogologo oge, na-egosi na ọkwa ike ha amụbaala.
Site na imeziwanye ogo ike, a maara Synephrine iji mee ka arụmọrụ egwuregwu kwa. Mmetụta agwakọtara nke mmefu ike nke abụba na nke na-akpali akpali na-akwalite arụmọrụ ma na-abawanye ụba nke mmepụta enwetara site na mmega ahụ aerobic na anaerobic. Nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ nnukwu mmega ahụ mmega ahụ na a abụba ọkụ kwa.
Nke ahụ bụ usoro ịkụda abụba n'ime ahụ. A kọwara ya nke ọma dị ka metabolism. Synephrine na-arụ ọrụ site na ịba ụba metabolic nke mmadụ na-eme ka mmadụ gbaa mmanụ ọkụ ngwa ngwa. Ọ na - akọwa ihe kpatara ị na - ewere Synephrine ga - eme ka ị gbaa abụba karịa ebe ọ bụ na mgbe metabolism dị elu, ahụ gị nwere ike iru abụba echekwara iji nweta ọtụtụ.
Nedị usoro Synephrine HCL dịgasị iche site n'otu onye gaa na onye ọzọ. Otú ọ dị, usoro onunu ogwu dị ka a arọ ntụ ntụ bụ 100mg kwa ụbọchị. Otú ọ dị, nchọpụta na-egosi na usoro ọgwụgwọ Synephrine HCL nke 35mg dịkwa irè. Na Usoro ọgwụgwọ Synephrine HCL ekwesịghị ịdị karịa 200mg n'ụbọchị iji zere nsí.
Maka mmetụta nke Synephrine na-arụ ọrụ ma ọ bụ dị ka ihe na-ere ọkụ, ị kwesịrị ijide n'aka na ị were ya ihe mbụ n'ụtụtụ na nkeji iri na ise ruo nkeji iri atọ tupu mmega ahụ. A na-atụ aro ka ị were ha mmiri.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị nwere ike ịhọrọ iji Synephrine n'onwe ya, ndị ọzọ nwere ike ịhọrọ ịkwado ya. Nwere ike iji ya na ọgwụ ndị ọzọ na-efu ọnwụ na kwa ndị na-eme ka ike gị dị elu. Yohimbine jikọtara nke ọma na Synephrine, karịsịa ma ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịhapụ ibu.
Obi abụọ adịghị ya, Synephrine HCL bụ grail dị nsọ nke ntụ ntụ na-ebu ibu. Ọ na - enyere aka igbochi agụụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iri obere ma ọ bụ belata iri nri na - adịghị mma. I nwedịrị ike ikpebi ịkwụsịlata agụụ ị ga-eji Ihe mgbakwunye Synephrine iri-na-anọ na anọ ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ị na-ọsọ ọsọ.
Ọ bụrụ na ejiri ya na nri na mmega ahụ nwere ezi uche, ị ga-ahụ nsonye Synephrine na nsonaazụ ọnwụ n'ime izu abụọ iji. Maka onye ọ bụla na-agba mgba na nri, na-eri oke nri, ma ọ bụ na-eche na ha chọrọ iwepụ abụba ụfọdụ na ahụ ha, nke a bụ ezigbo ahịa!
Ugbu a ị kpebisiri ike iru ihe mgbaru ọsọ gị, olee ebe ị ga-esi nweta abụba a? Dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ikwe nkwa inye gị Synephrine kacha mma, ị ga-akpachara anya ka ụfọdụ nwere ike ịre gị ngwaahịa adịgboroja. Anyị na-enye gị uru maka ego gị site na ịnye gị mgbakwunye Synephrine nke dị mma ma dị irè. Ozugbo ị zụta Synephrine n’aka anyị, enwetara gị obi na ị ga-agba abụba ma tufuo abụba ngwa ngwa na-adịgide.
Ihe mgbakwunye ọnwụ anyị na-enweghị ihe ọghọm ebe ọ bụ na ha bụ 100% eke na-enweghị mgbakwunye mgbakwunye. Dezie ntụ ntụ 'ọrụ ebube' nke anyị taa na-efu pound na-achọghị ka ị nwee ike ịnweta uru Synephrine.
The Health Professional's Guide to Dietary Supplement, nke Shawn M. Talbott, Kerry Hughes dere, peji nke 13
Kedu otu Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) si arụ ọrụ maka ndị na-ahụ maka ahụ Kedu ka Orlistat si arụ ọrụ dị ka ọgwụ na-efu ibu dị arọ?